“भगवान गुणेशको दर्शन गरि पुष २८ गते/ जनवरी १२मंगलबार तपाईको भाग्य कस्तो छ राशिफल हेर्नुहोस” – Krazy NepaL
January 11, 2021 498
भोलिको राशिफल बि.सं.२०७७ साल पुष २८ गते मंगलबार ई. सं. २०२१ जनवरी १२ नेपाल सम्बत ११४१ थिंलाथ्व चतुर्दशी, प्रमाधि नामक संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन, हेमन्त ऋतु, पुष कृष्ण चतुर्दशी, चन्द्रमा धनु राशिमा, मूल नक्षत्र ७ः.५४ सम्म त्यसपछि उत्तरषाढा नक्षत्र, व्यागात योग ३ः ०० सम्म त्यसपछि हर्षण योग, शकुनी करण १२ः४१ सम्म त्यसपछि नाग करण । नेपालमा सूर्योदय बिहान ०६ः’५६ बजे, सूर्यास्त साँझ ५ः२९ बजे हुनेछ । भो’लि जन्म लिने बच्चाको धनु राशि हुनेछ । आज महत्वपूर्ण का’र्यका लागि बाहिर निस्कनु पर्दा सक्खर वा गुँड खाएर जुनसकै दिशाको यात्रा गरेपनि शुभ फल प्राप्त हुनेछ । भोलि कुनैपनि महत्वपूर्ण कार्य तथा दिवश परेको छैन । भोलि कुनै महत्वपूर्ण कार्यको शुरुवात वा शुभ यात्रामा निस्कन भोलिका लागि शुभ समय बिहान १० बजेर ५४ मिनेट देखि १ बजेर ४३ मिनेट सम्म छ । यो समय ने’पालको राष्ट्रिय समयमा आधारित समय हो । ठाउँ अनुसार समय, तिथि, नक्षत्र, ईत्यादीमा पनि अन्तर हुनेछ ।
मेष – दिन शुभ र भाग्योदयकारी सिद्ध होला । आरोग्यता र प्रशन्नता बढ्नेछ । सुख–शान्तिमा वृद्धि हुनेछ । वार्तामा सफलता प्राप्त होला । विलासमा पनि आकर्षण बढ्ला । मान पुरस्का’र मिल्नेछ । उन्नति–पदोन्नति हुनेछ । यश वर्चश्व बढ्ला । विजयश्री प्राप्त होला ।
मिथुन – भागदौड व्यस्तता बढ्ला । विकासको नयाँ सम्भावना देखापर्नेछ । आशा अँंट उत्साह बढ्नेछ । साथीभा’इको सहयोग मिल्नेछ । उन्नति–पदोन्नति हुनेछ । जोखिममा नपर्नु बेस होला । ‘सोचीविचारी काम गर्नुपर्ला । आशा उत्साह बढ्ला, नयाँ काममा सफलता मिल्नेछ ।
कन्या – व्यस्तता र खर्च बढ्नेछ । मिठो भोजन मिल्नेछ । यात्रा होला । सुख शान्ति समृद्धि बढ्नेछ । कुनै पनि शारीरिक र आर्थिक जोखिममा नपर्नु उचित रहला । बौद्धिक र रचना’त्मक कार्यमा लाग्नु बेस हुनेछ र सफलता पनि मिल्नेछ । इष्टमित्र सन्तानको सहयोग मिल्नेछ । रसरागमा आकर्षण बढ्ला ।
तुला – धनको आगमन भैरहनेछ । खेलकुद भ्रमणमा आकर्षण बढ्नेछ । समस्याको समाधान मिल्नेछ । सुख समृद्धि मान पुरस्कार आदिमा विघ्नबाधाको डर रहला । मिठो भो’जन खान पाउनुहुनेछ । अरुसित मिलेर काम गर्नु बेस रहला तर अरुको भरमा बस्नु र विवादमा पर्नु उचित हुने छैन ।
धनु – धर्मपथमा सफलता मिल्नेछ । उन्नति–पदोन्नति हुनेछ । मनोकुलको काममा सफलता मिल्नेछ । उच्चाधिकारीको सहयोग मिल्नेछ । बोली र व्यक्तित्वको प्रभाव बढ्ला । शैक्षिक र बौद्धिक काम बन्नेछ । इष्टमित्रको सहयोग मिल्नेछ । धन मान महत्व बढ्ला । रसराग गीत–संगीतमा आकर्षण ब’ढ्नेछ । सुख सन्तति बढ्नेछन् ।
मकर – खर्च र लगानी बढ्ला । धो’खा हुने ठगिने सम्भावना रहनेछ । सोचीविचारी काम गर्नु अनुकुल रहनेछ । हांसविलासमा आकर्षण रहला । नियमकानूनलाई ध्यानमा राख्नुपर्नेछ । ऋण रोग र शत्रुप्रति सचेत रहनुपर्नेछ ।
कुम्भ – धन यश मान सुख समृद्धि बढ्नेछ ।सुखशान्ति मान महत्व ब”ढ्नेछ । साझेदारीको काम बन्ला । मिठो ‘भोजन मि’ल्नेछ । हांसविलासमा आकर्षण ‘बढ्ला । ‘आरोग्यता बढ्नेछ । मिठो भोजन मिल्नेछ । रसरागमा आकर्षण बढ्नेछ ।मिठो भोजन मिल्नेछ । प्रेममा रूचि बढ्ला । भ्रमण पनि गर्नुहुने सम्भावना रहनेछ । बौद्धिक र रचनात्मक कार्य बन्नेछ ।
मीन – आय वृद्धि हो’ला । बोली र व्यक्तित्वको प्रभाव बढ्नेछ । वार्तामा सफलता मिल्नेछ । मान पुरस्कार मिल्नेछ । गौर”वमा ब’ढोत्तरी हुनेछ । लगानी उठ्नेछ । अन्नधन बढ्ला ।प्रयासरत काम बन्नेछ । रसरागमा रुचि बढ्ला । उच्चाधिकारीको सहयोग समर्थन मिल्नेछ । आरोग्यता वृद्धि होला ।
Prev“पशुपतिनाथ मन्दिर इतिहासमा यति लामो अवधि भक्तजनका लागि बन्द रहेको याे मितिबाट खाेलिदै छ “